Embroidery & Yakarukwa Fekitori - China Embroidery & Yakarukwa Vagadziri uye Vatengesi
Yakareba nhoroondo machira zvigadzirwa, zvino zvakagadzirwa nemuchina. Fekitori yedu yakavambwa muna 1984, isu tine zvakawanda zviitiko mukushongedza & dzakarukwa zvigadzirwa. Vashandi vedu vanokwanisa kushandisa michina yakawanda. Uye mumwe muchina anogona kuwana 20-30pcs zvakafanana zvigadzirwa panguva imwe chete. Isu tinoita izvi zvigadzirwa zvemachira zvinogadzira kuve kwakanyanya kushanda. Ipapo vatengi vanogona kuwana nemitengo yakachipa. Tinogona kupa dzakarukwa uye dzakarukwa zvigadzirwa. Embroidery & zvigadzirwa zvakarukwa zvinozivikanwa sechikamu chekushongedza kwenguo / nguwani / mabhegi. Kunyanya yakaderera MOQ uye ipfupi yekugadzira inotungamira nguva yeCustomized dhizaini. Saka vatengi vazhinji vanosarudza izvi kuti vagadzire logo / dhizaini vobva vanamatira kune zvigadzirwa zvikuru. Uye iyi mhando ye logo yakanyatsogadzikana, uye mushure menguva zhinji geza uchiri chengeta sepakutanga. Embroidery logo ine 3D maitiro. Uye kune mamwe magadzirirwo akasarudzika, anogona kuita kuti dhizaini ive yakajeka. Semuenzaniso, dzimwe mhuka dzine vhudzi. Threads dzinogona kuita kuti bvudzi riwedzere kunyatso kuoneka uye nekubata. asi kune imwe diki logo uye tsamba dzakarukwa dzinogona kuwana zvirinani ruzivo. Uye isu tinogona kuita yakarukwa neyekushongedza logo mune chimwe chigadzirwa. Uye isu tinogara tichipa zvakanakira mazano kune vatengi vedu. Welcome titenge design yako kwatiri!
Chinzvimbo chebhawa / Chemauto Chinzvimbo / Chiuto Chinzvimbo / ...